म कसरी थाहा पाउँछु कि मेरो Youtube मा कति सदस्यहरु छन्? ➡️ अनुयायी ▷
मलाई थाहा छ म YouTube मा कति ग्राहकहरू छन्?
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 356
एक प्रसिद्ध Youtuber बन्ने सपना देख्नेहरु को लागी सदस्यहरुको संख्या महत्वपूर्ण छ। प्लेटफर्म भित्र सब्सक्राइबरहरुको संख्या जति धेरै हुन्छ, त्यति नै धेरै सामग्रीको प्रसार उनीहरुका च्यानलहरुमा पोष्ट हुनेछन्।
त्यो कारण को लागी आज हामी तपाइँलाई छिटो र सजिलो तरीका देखाउन चाहन्छौं हाम्रो च्यानल कती सक्रिय सदस्यहरु संग पत्ता लगाउनुहोस् YouTube बाट। यस प्रकार हामी च्यानल को बृद्धि को अध्ययन गर्न को लागी र प्लेटफर्म भित्र हामीलाई पछ्याउने को पहिचान गर्न सक्षम हुनेछौं।
हाम्रो यूट्यूब च्यानल कती ग्राहकहरु लाई थाहा पाउन को लागी एक छिटो तरीका मध्ये एक डेस्कटप संस्करण बाट यो गर्न को लागी हो। हामी मात्र आधिकारिक यूट्यूब पृष्ठ पहुँच गर्न हुनेछ (www.youtube.com) र हाम्रो ईमेल र पासवर्ड संग लग इन गर्नुहोस्।
के तपाइँसँग एक YouTube च्यानल छ? धेरै राम्रो। तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि ग्राहकहरुको संख्या प्लेटफर्म भित्र तपाइँको बृद्धि को लागी महत्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ एक विशिष्ट रकम सम्म पुग्न को लागी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको च्यानल मा अपलोड सामग्री को माध्यम बाट पैसा कमाउन शुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
यसैले यो को लागी धेरै सचेत हुन को लागी महत्वपूर्ण छ नयाँ च्यानलहरु जो हाम्रो च्यानल मा जोडिएका छन्। त्यहाँ पत्ता लगाउन को लागी एक काफी छिटो तरीका छ र यहाँ हामी तपाइँलाई यो कदम बाट कदम को व्याख्या गर्न जाँदै हुनुहुन्छ:
पृष्ठ खोल्नुहोस् तपाइँको पीसी बाट YouTube (youtube.com)
क्लिक गर्नुहोस् प्रोफाइल फोटोमा (स्क्रीनको माथिल्लो दाहिने कुनामा)
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् "यूट्यूब स्टुडियो"
मुख्य स्क्रीन मा तपाइँ केहि सहित तपाइँको च्यानल संग सम्बन्धित डाटा देख्नुहुनेछ सदस्यहरुको संख्या
यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु को बारे मा एक अधिक विस्तृत रिकार्ड गर्न चाहानुहुन्छ र च्यानल हालको महिनाहरुमा बढेको छ तपाइँ विकल्प "सांख्यिकी" मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको बायाँ तिर।
ग्राहकहरु को संख्या पत्ता लगाउन को लागी प्रबन्ध गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल को यूट्यूब मोबाइल आवेदन को माध्यम बाट पनि सम्भव छ। प्रक्रिया धेरै सरल छ र यहाँ चरणहरु तपाइँ पालना गर्नुपर्छ:
खोल्नुहोस् तपाईंको मोबाइलमा युट्यूब अनुप्रयोग
क्लिक गर्नुहोस् तपाइँको प्रोफाइल तस्वीर को बारे मा (स्क्रीन को माथि दायाँ कुना)
थिच्नुस "तपाईंको च्यानल"
तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम तल ग्राहकहरुको संख्या देखा पर्नेछ जसको साथ तपाइँ हाल तपाइँको YouTube च्यानल छ।
कसरी Youtube मा मेरो ग्राहकहरु संगठित गर्न
यूट्यूब प्लेटफर्म बाट तपाइँ मात्र देख्न सक्नुहुन्न कि तपाइँ तपाइँको च्यानल मा कति ग्राहकहरु छन् तर तपाइँसँग यो संगठित गर्ने विकल्प पनि हुनेछ। A) हो तपाइँ सबैभन्दा लोकप्रिय पहिलो देख्न सक्नुहुन्छ वा सबैभन्दा भर्खरका ग्राहकहरु देख्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु संगठित गर्न चाहानुहुन्छ तपाइँले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा तपाइँको खाता संग YouTube मा पहुँच छ। तब तपाइँ प्रोफाइल फोटो मा क्लिक गर्नुहोस् र विकल्प "यूट्यूब स्टुडियो" चयन गर्नुहोस्:
ट्याब पहुँच गर्नुहोस् "सदस्यहरू"र त्यहाँ शीर्ष दायाँ मा स्थित ड्रप-डाउन मेनू पत्ता लगाउनुहोस्। यस सेक्सन बाट तपाइँ संभावना तपाइँको ग्राहकहरु लाई वर्गीकृत गर्न को लागी तपाइँ फिट देख्नुहुनेछ। तपाइँ तिनीहरूलाई सबैभन्दा लोकप्रिय वा सबैभन्दा भर्खरै क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले तपाइँ एक धेरै संगठित च्यानल हुनेछ।
1 पीसी बाट
3 कसरी Youtube मा मेरो ग्राहकहरु संगठित गर्न
कसरी ट्विटरमा ट्वीटडेक टोलीको फाइदा लिन?
कसरी YouTube मा तपाइँका सूचनाहरू कन्फिगर गर्न सिक्ने?